Umbuso we-Sonoma: I-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO WESIKOLO
I-Sonoma State GPA, SAT kunye ne-ACT Graph
I-GPA kwi-University of State GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukuba kwamkelwe. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Unokulinganisa njani kwiYunivesithi yeSizwe ye-Sonoma?
Ingxoxo yeeNkqubo zokuVumeliswa kweeNkcukacha zikaRhulumente waseSonoma:
I-quarters yesithathu yabafaki zicelo bayangeniswa kwiSizwe saseSonoma , esinye sezikolo ezingama-23 kwi- University of California State System . Abafundi abaneempawu ezifanelekileyo kunye namanqaku okuvavanya banethuba elihle lokufumana. Amachaphaza aluhlaza kunye namabhakabhaka kwigrafu engenhla abamele abafundi abamkelweyo, kwaye unako ukubona ukuba uninzi lwabafakizicelo abaphumeleleyo banomlinganiselo ophakamileyo wesikolo "B-" okanye ngaphezulu, ii-SAT izikolo (RW + M) ezingama-950 okanye ngaphezulu, kunye ne-ACT izikolo 18 okanye ngaphezulu. Uya kubona kwakhona ukuba abanye abafundi abanamabanga aphantsi kunye namanqaku angenawo. Nangona kunjalo, phawula ukuba kukho amanani amaninzi obomvu (abafundi abachasiweyo) phakathi kwegrafu. Abanye abafundi abanamabanga kunye neemvavanyo zokuvavanya ezibonakala zijoliswe kuRhulumente we-Sonoma ziya kukhishwa.
Ukuze ufunde kabanzi malunga ne-Sonoma State, ii-GPA zezikolo eziphakamileyo, izikolo ze-SAT kunye nama-ACT, amanqaku angancedisa:
IProfayili ye-Admissions kaRhulumente ye-Sonoma
I-Gettysburg College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
I-Arcadia Yunivesithi ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Hampshire College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Yintoni Eyona Ngxelo Yesihlandlo Sesibili?
Indlela yokuphendula 5 "Iqhinga" Imibuzo yoBugcisa
Ukudala Imifanekiso Yengcaciso Ebonakalayo Yemidlalo - Intro